Iskahorimaad hubeysan oo saaka ka dhacay magaalada Beledweyne – AfmoNews
Iskahorimaad hubeysan oo saaka ka dhacay magaalada Beledweyne
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka ay soo weerareen fariisimo ay ciidamada dowlada ku lahaayeen magaalada maleeshiyaad uu hoggaamiyo General Xuud.
Maleeshiyaadka ayaa la sheegay inay gudaha u soo galeen xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne balse markii dambe ay dib ugu laabteen saldhig ay ku leeyihiin deegaanka Ceel-gaal.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in labo ruux ay ku dhaawacmeen rasaastii ay is weydaarsanayeen ciidamada milatariga iyo kuwa maleeshiyaadka General uu hoggaamiyo General Xuud.
Iskahorimaadka kadib ayaa la sheegay in gudaha magaalada Beledweyne uu ka bilowday banaanbax loogaga soo horjeedo Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen.
Banaanbaxan ayaa ka mid ah banaanbaxyo ay maalmihii la soo dhaafay ka dhigayeen magaalada Beledweyne dad ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle.
Dadka banaanbaxaya ayaa waxa ay dhagxaan dhigeen waddada ugu weyn magaalada Beledweyne ee xiriirisa garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada.
Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku sugan Wasiirka Arrimaha Gudaha dowlada federalka General Muqtaar, Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed,guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Luqmaan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle.
Previous articleDoon ganacsi oo ku xiratay Dekedda magaalada Hobyo
France may require rapid Covid-19 tests from Irish truck drivers arriving by sea, not UK –